Kitra – Fifanintsanana Can 2019: nisaraka ady sahala 2 sy 2 ny Liona Senegaly sy ny Barea | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana Can 2019: nisaraka ady sahala 2 sy 2 ny Liona Senegaly sy ny Barea
Ady sahala, 2 sy 2 no nisarahan’ny Liona-n’i Téranga avy any Sénégal sy ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fihaonana mandroso, hiadiana ny Can 2019. Lalao notanterahina, omaly alahady, tetsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina. Voahaja ny lojika, raha ny vokatra satria ekipa mbola ao anatin’ny tanjany tanteraka ny senegaly, vao avy niatrika ny “Mondial 2018”, farany teo.
Mbola hita tao amin’ireo mpilalaony, ny traikefa sy ny fahazaran-dalao goavana. Na izany aza, tsy nanana tahotra mihitsy ny mpilalao malagasy, niatrika azy ireo fa tena nanohitra sy nampiseho ny fahaiza-manaony. Ry zareo Senegaley, hatrany anefa no nitarika an’isa. Nanokatra izany, i Moussa Konate, teo amin’ny minitra faha-26, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo, rehefa namerina baolina tsy dia lasa lavitra i Metanire. Tsy naha hetsika mihitsy i Leda, mpiandry tsatoby.
Tsy kivy tamin’izany, ry Ima sy ry Bapasy fa niezaka nitady irika hatrany hamonoana baolina. Tsy tonga anefa izany raha tsy efa tany amin’ny minitra faha-43, taorian’ny rindran-damina, nataon’i Bôlida sy i Njiva ary Ima, izay nahita an’i Voavy Paulin, namarana izany tamin’ny daka tsotra. 1 sy 1 ny isa teny amin’ny solaitrabe. Velom-bolo tanteraka ireo mpijery analiny, tao Mahamasina.
Fidirana faharoa, nanao izay ho afany ny Senegaley notarihin’i Sadio Mané, nampian’i Saar. Nampiasa ny habeny sy ny halavany izy ireo, saingy tsy tonga hatramin’ny farany ny fanafihany. Nitady an’i Bôlida sy i Paulin hatrany kosa ny fanafihana malagasy, nefa tsy nandingana tao amin’ireo vodilaharana senegaley. Na izany aza, nahatafiditra baolina i Balde, teo amin’ny minitra faha-60 raha somary nitsingintsingina sy tsy sahy nidona tamin’ireo Senegaley, ny vodilaharana malagasy. Hany ka nanavatsava olona telo, i Balde, afaka nandaka tsara tsy nisy mpanelingelina.
Nanao fanoloana mpilalao i Nicolas Dupuis, teo amin’ny minitra faha-60. Nesorina i Paulin, nampidirina i Carolus. Avy hatrany dia nahazo baolina ny lehilahy, izay nodominy tamin’ny lohany ka nahatonga ny vodilaharana senegaley, hamono tena. 2 no ho 2 ny isa teo. Nahazo aina tanteraka ny Barea. Nofeheziny ny lalao, tao anatin’ny 10 mn farany. Totoafo ny fanafihana, saingy tsy nety nahakobana ny masonaraton’ny Senegaly intsony izany.
Samy manana isa 4, izany ny roa tonta, taorian’ity lalao ity. Isa 3 kosa ny an’i Ginea Ekoatorialy, izay nandresy an’i Sodan, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0.
Dingana manarana, ny 7 oktobra ho avy izao ka hanafika an’i Ginea Ekoatorialy ny Barea de Madagascar ary hampiantrano an’i Sodan kosa ny Senegale.